UMhlangano Waminyaka Yonke Ka-2013—Umbuthano Omkhulu Kunayo Yonke WoFakazi BakaJehova
NGOMGQIBELO, ngo-October 5, 2013 abantu abangu-257 294 emazweni angu-21 bathamela umhlangano waminyaka yonke we-129 we-Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania besendaweni yomhlangano noma bewubukela kwezinye izindawo ngosizo lwe-Internet. Kamuva ngaleyo mpelasonto, abanye oFakazi baphinde bawubukela lo mhlangano owawusuqoshiwe. Sebebonke abathamela lo mhlangano babengu-1 413 676 emazweni angu-31—okwakuwumhlangano omkhulu kunayo yonke eyake yaba khona yoFakazi BakaJehova.
Kusukela ngawo-1920, oFakazi BakaJehova baye basakaza imihlangano kwamanye amazwe besebenzisa ucingo neziteshi zomsakazo ezinkulu. Manje, ubuchwepheshe be-Internet benza ngisho nabantu abasezindaweni ezisemajukujukwini bakwazi ukuzwa nokubona okwenzekayo lapho kwenzeka noma ngokushesha ngemva kwalokho.
Amalungu avela emahhovisi egatsha ahlukahlukene asebenza isikhathi esingaphezu konyaka ehlela ukusakazwa kwesimiso nge-Internet. Ngempelasonto okwasakazwa ngayo, ochwepheshe babebheke isimiso beseBrooklyn, eNew York futhi besebenza ubusuku nemini njengoba isimiso sasisakazwa ezindaweni zomhlangano ngezikhathi ezingu-15 ezihlukahlukene.
Amanqampunqampu—Izindawo Okwasakazwa Kuzo Nge-Internet
Indawo okwakuqhutshelwa kuyo umhlangano: IHholo LoMhlangano LoFakazi BakaJehova LaseJersey City, eNew Jersey, e-U.S.A. Inani lababekhona: 4 732
Indawo enkulu kunazo zonke: EPerth, e-Australia. Inani lababekhona: 7 186
ENyakatho ekude: EFairbanks, e-Alaska, e-U.S.A. Inani lababekhona: 255
ENingizimu ekude: E-Invercargill, eNew Zealand. Inani lababekhona: 190
Indawo ekude kunazo zonke: EPerth, e-Australia, engaba amakhilomitha angu-18 700 uma usuka eJersey City
Indlela Ukusakaza Nge-Internet Okusebenza Ngayo
Isimiso sithwetshulwa ngamakhamera e-video amaningana.
Osekuthwetshuliwe kuthunyelwa emshinini wokuhlela kahle ama-video bese kukhethwa i-video engcono.
Ngemva kwalokho, i-video eqoshiwe iya lapho kusakazwa khona.
Kwenziwa ama-video esimiso ezinga eliphansi, ezinga eliphakathi nawezinga eliphezulu njengoba isimiso siqhubeka.
Ama-video abe esehlukaniswa abe izingxenyana ezidlala imizuzwana eyishumi.
Lezi zingxenyana zenziwa zitholakale kuyi-Internet.
Umshini othile ezindaweni zomhlangano udawuniloda lezo zingxenyana bese uyazigcina. Lo mshini ube usuzihlanganisa zibe i-video eyodwa.
Izilaleli zibukela futhi zilalele isimiso.
Umbiko Womhlangano Waminyaka Yonke—October 2013